Ngokomlando, i-lipstick yokuqala yabonakala eminyakeni engaba ngu-5000 edlule. Yenziwe ngokusebenzisa i-bex, i-animal fat kanye ne-pigment ebomvu - i-carmine. I-carmine itholakala ku-carmic acid eyenziwa yizinambuzane ze-cochineal. I-Carmine ibhaliswe njenge-supplement E120 (okuvunyelwe ukusebenzisa embonini yokudla yaseRussia Federation njengomsizi wokukhiqiza ukudla (p.2.25.2 SanPiN 2.3.2.1293-03).
Ochwepheshe beRoscontrol banquma ukuthola ukuthi yini ehlanganisiwe ekubunjweni kwezindebe zomlomo zanamuhla nokuthi ngabe impela njengemvelo njengokukhangisa.
I-OZPP "I-Roskontrol" ithenge izindebe ezihlotshisiwe zezimpawu ezibomvu zamatshe athandwa kakhulu futhi zihlolwe kuzo izinqubo ezibaluleke kakhulu zalesi sigaba: ukutholakala kwezinsimbi ezisindayo nezinto eziyingozi (i-mercury, ihola, i-arsenic), ikhono lokubangela ukucasuka, ukuhambisana nokuphila kwelanga.
I-Max Factor (ibhubhe engu-422.) Nge-lipstick Umbala we-Elixir Lipstick Tone No. 685 ,
I-Maybelline ( ibhubhe engu-180.) Nge-lipstick Hyderra ngokweqile nge-collagen 39 / i-bois de rose naturel Natural Rosewood 670 ,
I-Oriflame (ama-ruble angu-139) ane-lipstick I-5-in-1 umbala we-stylist i-lipstick ithoni I-Red Haute Cout ,
I-Pupa ( ibhubhe engu- 625.) Nge-lipstick I- PupaI-tone ye-tone No. 500 ,
I-Avon (i-rubri engu-189.) Iwayini elingapheli lokulondoloza ,
I-Dior (i-rubber engu-1730.) Nge-lipstick I- Dior Umlutha Izwi elidumile Ithembo 866 i-paparazzi
I-Clinique (ibhulogi engu-1 290.) Umbala ophezulu we-Impact Lip ithoni 27 ngemuva kweqembu
Yini engozini mayelana nokuhola ku-lipstick
Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi ukuhola, 3.19, 4.23, kanye no 4.37 mg / kg, ngokulandelana, kutholakala ku- Dior, Maybelline, no- Oriflame amasampula. Ngokuqinisekile, lokhu akuyona ukwephulwa, ngoba umkhawulo osungulwe yizimiso zobuchwepheshe uvumela okuqukethwe okuholela okungaphezulu kuka-5 mg / kg. Noma kunjalo, ngokusho kwezibalo, owesifazane odla ngayo ama-tubestick amabili ngonyaka, uthola 0.04 mg wokuhola, ngokulandelana. Kungase kubonakale okuncane, kodwa le nto inezinto zokuqoqa emzimbeni.
Futhi, amasampuli ahlolwe i-arsenic ne-mercury. Futhi uma izindinganiso ezilawulwayo zokuba khona kwe-arsenic zihlangabezana nazo zonke amasampula, ke nge mercury, lipsticks brand Pupa, Oriflame no Maybelline banezinkinga. Lawa masampuli adlula inani elivunyelwe lika 0.7 mg / kg: 8.15, 8.23, 7.61, ngokulandelana.
U-Andrey Mosov, oyinhloko yomnyango wezobuchwepheshe uNP Roskontrol:
"Ngaphakathi kwemingcele yezinga, lokhu kubalwa kuthathwa njengokuvumelekile, kodwa ungakhohlwa ukuthi ukuhola, njengensimbi enzima, kunendawo yokuqoqa, okusho ukuthi ukuhlushwa kwayo emzimbeni kuyanda ngesikhathi. Isikhathi sokususa esiholela emzimbeni singaba iminyaka engaphezu kwengu-20. Amazinga aphezulu okuhola emzimbeni angabangela ukungabi nabesifazane, kungabangela izifo zesistimu yethambo. Ngaphezu kwalokho, ukuhola okuningi emzimbeni kuphazamisa ukufana kwamanye izinto ezibalulekile njenge-calcium, i-zinc, i-selenium. Ukuhola ngokweqile emzimbeni kungabonakala ekukhatheni okwandayo, ikhanda, ukukhubazeka kwememori, ukwanda kwengcindezi yegazi. I-Mercury iyinkinga kakhulu, iyasebenza ngokungenakuqhathaniswa. Futhi lokhu kuyinto embi kunazo zonke. "
Ukumaka amaphakheji azo zonke amasampuli ashiya okuningi okudingekayo. Esikhathini se- Max Factor i- lipstick tube iyisibonakaliso sesandla ngesandla somunwe ophakanyisiwe - ubufakazi bokuthi ilebuli kufanele ifakwe emthini, isibonelo, incwajana enolwazi oluningiliziwe. (Kwakungekho ncwajana enjalo.) Ukubunjwa okungaphelele kukhonjisiwe, okungukuthi, ama-dyes awashiwo, okuphikisana ne-TR ye-TS.
Emasampuli asele, amalebuli afakwe kufolda encane, engafundiwe. Lokhu akuvumeli abathengi ukuba benze izinqumo ezinolwazi futhi kuyiphutha elingathí sina kulabo abakhiqizi.
Ngokwezibalo zokubunjwa okwakushiwo kule ilebula, yonke imikhiqizo ivivinywa ayinayo izinto ezingavunyelwe ukusetshenziswa njengezithako emakhakheni anamakha nezimonyo. Zonke amasampula zinikeza i-smear efanelwe ngokufanayo, ekhombisa ukubunjwa okungcono kwezingulube namabalabala. Nokho, naphezu kwalokhu, ochwepheshe babe namazwana amaningi ekubunjweni kwamasampuli athile. Kuyini okuthakazelisayo, kokubili kumikhiqizo yentando yeningi, nakummeleli we-Luxury segment.
Ukuzwa komile nokuqina kungabonisa okuqukethwe okuphezulu kwamafayili amafilimu ane-coefficient ephansi yomoya kanye nomoya wokuvuthwa (isibonelo, i-resin resin) ekubunjweni kukaPupa, Oriflame, Maybelline .
Iphunga elimnandi kuma-sampuli kaMax Facor, uPupa, Oriflame (uphawu lwe-lipstick elibhubhisayo) lubonisa ukuxiliswa kwezingxenye ze-fat, okuqinisekiswa yizindinganiso eziphakeme kakhulu zezinombolo ze-acid ne-carbonyl ezitholakala kuzo. Njengoba kunikezwe isikhathi esiphezulu sokuphila (zonke izindebe zomlomo ezithengiwe zinezikhalazo ezinhle) zibonisa ukuthi ukubunjwa akulinganisiwe ngama-antioxidants okuvimbela uketshezi kwesigaba samafutha, noma okokuqala kuthathwe izinto ezibonakalayo zekhwalithi ephansi. Lesi esinye isizathu sokubeka lezi zinto ohlwini lwabantu abamnyama.
U-Alexander Borisov, usihlalo we-OZPP "Roskontrol":
"I-Lipstick Oriflame , i-lipstick kuphela eyenziwe eRussia ngokusho kwe-GOST, ngakho-ke iphunga elimnandi liwukwephulwa ngokuqondile kwe-Article 19.19 ye-Code of Administrative Offenses futhi isongela ngama-ruble ayizinkulungwane ezingu-50 kuya ku-100. Esikhathini samasampula asePupa naseMebelbelline, kwaba nomphumela ovusa amadlingozi, okuyinto, ngokusho TP 009/2011, akufanele kube. Ngokusho kuka-Art. 14.43 Ikhodi Yokuphatha yalokhu ukwephula inikeza inhlawulo yama-ruble ayizinkulungwane ezingu-100 kuya ku-300. Umkhiqizo we- MaxFacor ngaphandle kokunakekelwa kahle kwemithetho ukhishwe ilebula ngomkhiqizo wawo. "
Izithembiso, noma yini engazakheli ukukhangisa
I-Lipstick Oriflame nomphumela oshoyo we-moisturizing and nourishing the lips, has not confirmed this property. Umkhiqizi uthembisa ukunyamalala kombono wezindebe ngokushesha ngemuva kokufaka isicelo, futhi ngenxa yokuhlolwa kwemitholampilo, ukwehla okubukhali esimeni somswakama kusekwe ngu-10.9% emizuzwini emihlanu, ngo-28.8% ngemuva kwehora elingu-1, okubangela ukuzwa komile nokuqina. Umphumela ubizwa futhi uzinzile - emva kwezinsuku ezintathu zokusebenza okuvamile, izinga lokuswakama kwezindebe linciphise ngo-30.7% kusukela ekuqaleni, okuholela ekusomweni okuqinile kwezindebe nokuqhekeka kwabo.
I-Pupa kwi-website yayo ithembisa ukwandisa ngo-5% umthamo wezindebe emaminithini ayishumi emva kwesicelo sokuqala lapho unikeza ulwazi mayelana ne-lipstick ehlolwe. Ngesikhathi kuhlolwa ukuhlolwa kwemitholampilo, kutholakale ukuthi ukwanda kancane, futhi ihora kamuva liyancipha izinga lokuswakama (ngenxa yokwakhiwa kwe-glycerin, hhayi i-wax) - okuholela emiphumeleni ehlukile - ukunciphisa umthamo wezindebe.
Ngakho-ke, ukulinganisa kwaholwa yizintambo zomlomo wezinkampani zeClinique, i-Avon neDior, nohlu olumnyama lwe-Oriflame, i-MaxFactor, iPuppa no-Maybelline.
Isihloko Phatha Izimpawu zokuphutha Umphumela we-Irritant Imiphumela Ukuphikiswa
Avon "Extralasting" 2.79 ± 0.28 cha cha ifaka kahle kuhle
I-Clinique "Umbala Ophezulu We-Lip Impact" 2.69 cha cha ayinamanzi kuhle
I-Dior "Isiyaluyalu Esiyingozi" 3.9 ± 0.32 cha cha ifaka kahle kuhle
I-Max Factor "Umbala we-Elixir" 3.7 ± 0.37 iphunga elimnandi cha ayinamanzi kuhle kakhulu
Maybelline "Hydra Extreme" 4.23 ± 0.42 cha kukhona dries kakhulu buthakathaka
Oriflame "Lowo" 4.37 ± 0.44 iphunga elimnandi cha dries buthakathaka
I-Pupa "I-PupaVolume" I-1.90 ± 0.19 iphunga elimnandi kukhona dries kuhle
Indima yabesifazane ebhizinisini laseRussia
Kuyini owesifazane wesimanje
I-Gum iyinhlangano "yokufinyelela" engafanikiyo yomuntu wesimanje.
Yiziphi imikhiqizo ezizophakama ngentengo ngo-2015?
Ukuhlala okuhlangene ekamelweni elifanayo
Yiziphi ezinye imikhiqizo ezizophakama ngentengo ngenxa yezigwebo?
Owesifazane kanye ne-Intanethi
Ngingakwazi yini ukuqeda imithi yezinja?
U-Anastasia Volochkova uhanjiswe esibhekene ne-euro eyizinkulungwane ezingu-100
Uma umuntu ecasula owesifazane, ubani okufanele abe ngowokuqala ukubekezelela?
Indlela yokuphula ubuhlobo benkanyezi
Ukuhamba ngesitimela nengane: lokho okudingayo ukucabangela
Isaladi nge isipinashi kanye utamatisi cherry
I-Cherry Ice Cream
Ukulungiswa kobuso ngosizo lokwakheka
I-horoscope yomuntu siqu ka-Taurus ka-2010
Utamatisi ekheniwe nama-beet
Izindlela zomphakathi zokwelashwa okuhlangene
I-cholesterol ayiyona eyingozi kumzimba - zibonele wena